२४ वर्षे युवा जसले चलाउँछन् हजार होटल::Hamrodamak.com
२४ वर्षे युवा जसले चलाउँछन् हजार होटल
भारतको कट्टकमा जन्मिएका उनले सफल हुनको लागि कपाल फुल्नु आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि गरिदिए ।
ओयो रुम्स होटलका संस्थापक र सीइओ रितेश अग्रवाल एक यस्ता उदाहरणीय युवा उद्यमी हुन्, जसले कम उमेरमै लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेका छन् । भारतको कट्टकमा जन्मिएका उनले सफल हुनको लागि कपाल फुल्नु आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि गरिदिए ।
उमेरले भर्खरै २४ वर्ष भए अग्रवाल । उनी भारतलगायत नेपाल, मलेसिया, युएई, चीन र इन्डोनेसियाका दुई सय ३० शहरमा आठ हजार पाँच सयभन्दा धेरै होटलसँग साझेदारी गरिरेहेका छन् ।
चर्चित ‘ओयो रुम्स होटल चेन’ले सस्ता होटलहरुको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । ओयोले वार्षिक ४ हजार करोड भारतीय रुपैंयाभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्छ ।
रितेशलाई फोर्ब्स म्यागेजिनले ३० वर्षमुनीका सफल ३० युवा उद्यमीको सूचीमा समेटेको छ । उनको ओयो ब्रान्डले भारत लगायतका देशमा साना होटलहरुलाई आफ्नो छाताभित्र समेटेको छ । ओयोले विभिन्न शहरमा रहेका होटलहरुसँग साझेदारी गर्छ ।
ओयोमा आबद्ध भएपछि उनले होटलको सुविधा बढाउने, कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने र सेवालाई चुस्त बनाउन र होटलको बुकिङमा सहयोग गर्ने गर्छन् ।
रोचक खबर बाट अन्य
झापामा माछा खोज्दा अजिङ्गर फेला
झापा,२५ माघ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका– ४ मा माछा मार्ने क्रममा दुर्लभ अजिङ्गर भेटिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेका अनुसार बिहीबार स्थानीयवासीले खोल्सीमा माछा मार्ने क्रममा अजिङ्गर फेला पारेका हुन् ।...
छोटो समयमानै उत्कृष्ट चित्रकारको सज्ञा पाइन् शर्माले
बिर्तामोड । आठ महिना अघि देखि मात्र व्यावसायिक रुपमा स्केच बनाउन थालेकी आशा शर्माले करिअरको छोटो समयमानै उत्कृष्ट चित्रकारको सज्ञा पाइसकेकी छिन् । उनी विहानदेखि बेलुकासम्मै स्केच व्यस्त हुन्छिन् । उनी हुन् काठमाडौ १६...
काममा निदाएको समेत पैसा दिने यस्तो अचम्मको कम्पनी !
तपाइ कुनै कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाइलाई काम गरेबापत रकम दिन्छ तर संसारमा यस्ता कम्पनिहरु पनि छन् जुन कम्पनीले सुतेबापत आफ्ना कर्मचारीलाइ रकम भुक्तानी गर्दछन् । तपाइलाई यो कुरा सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर...
ओठबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ महिलाको यौन व्यवहार
एजेन्सी । ओठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओठ महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जसका कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन् ।...
चढ्ने होईन त् उड्ने बाईक? यस्तो मुल्यमा सुरु भयो अग्रिम बुकिङ !
एजेन्सी । प्लेन, हेलिकाेप्टर पछि अब उडने बाईक बनेको छ । रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ ले यस्तो बाइक बनाएकाे हो । कम्पनीले बाईकको अग्रिम बुकिङ समेत थालेको छ। कम्पनीले ‘होबरबाइक एसथ्री २०१९’ मोडलको प्रिअर्डर सुरु...
नग्न भएर सुत्नुका पनि यस्ता फाइदाहरु
मानिसलाई काम गरिसकेपछि आराम गर्नु हाम्रो स्वास्थ्य र शरिर दुवैका लागि सबै महत्वपुर्ण कुरा हो । मानिसलाई स्वस्थ र शरिरलाई इस्फुर्त राख्नको लागि निन्द्रा लाग्नु आबश्यक रहन्छ । कतिपय मानिसहरुको कपडा लगाएर सुत्ने बानी हुन्छ...
हस्तमैथुन गर्दा महिला र पुरुषलाई हुन्छन यस्ता फाइदाहरु
हस्तमैथुन भन्नाले हातको माध्यमबाट खेलाएर वा विभिन्न प्रकारले यौन आनन्द लिने कार्य हो ।तर यसको विषयमा धेरैलाइ थाहा छैन । कति यसको शिकार भइराखेका छन । कतिपय हस्तमैथुन गर्न हुने हो कि होइन भनेर...
यसरी थाहा हुन्छ महिला र पुरुषले विवाहअघि यौन सम्पर्क गरेको
विवाहअगाडि महिलाले यौनसम्पर्क राखे/नराखेको सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए/नआएको वा दुखे/नदुखेको कुरालाई आधार मानेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषको सवालमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे/नफाटेको, पछाडिसम्म खुले/नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए/नभएको आधारमा...
नेपालमै यस्तो अफर : कपाल काटेर तक्लु बन्नुहोस् र पाउनुहोस् पचास हजार पुरस्कार !
काठमाडौं, २० कार्तिक । चलचित्र ‘प्रेमलीला’ माघ २५ गतेबाट अलनेपाल प्रर्दशनमा आउने भएको छ । चलचित्रकी अभिनेत्री दीपशिखा खड्काले चलचित्रका लागि केही समय आगाडी कपाल मुण्डन गरेकी थिइन् । चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै जाँदा निर्माण...
यस्तो हुन्छ यौन सम्पर्कका बेला यौनाङ्गको अवस्था
यौन सम्पर्क गर्दा महिला पुरुष दुवैको यौन अंगमा घषर्ण हुनुका साथै यौनाङ्गको आकार तथा लम्बाइ पनि केही समयका लागि बढ्ने हुन्छ । यौन उत्तेजना अघि सामान्य अवस्थामा रहेका महिला पुरुषका यौनाङ्गहरु त्यसबेला बढ्न थाल्छन् जब...